Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Liverpool guusha ka soo gaartay Cardiff City – Gool FM
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Liverpool guusha ka soo gaartay Cardiff City
(Cardiff) 22 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Liverppool ayaa guul ka soo gaartay naadiga Cardiff City oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Cardiff City ayay Reds kooxda lagu naanayso ku adkaatay 2-0.
Labo goo loo ay kala dhaliyeen qeybtii dambe ee ciyaarta Georginio Wijnaldum iyo James Milner ayaa Liverpool kaga filnaatay inay Cardiff City ku garaacaan gurigeeda.
Haddaba halkaan hoose waxaan ku eegeynaa rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Liverpool ayaa haatan uruursatay 88 dhibcood horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan waana heerkii ugu fiicnaa ee abid ay ka keensato horyaalka Premier League hal xilli ciyaareed, inkastoo horyaalka ingiriiska intii aan magaca Premier League loo bixin ay horyaalka xilli ciyaareedkii 1978-79 ay la yimaadeen 98-dhibcood, halka kal ciyaareedkii 1987-88 ay keensadeen 90 dhibcood, laakiin waxa aan ka hadlaynaa waa horyaalka Premier League, waxaana ay Reds haysataa fursad ay rikoorkeeda dhibcaha haatan ku sii dheereysan karto maadaama ay kulamo u harsan yihiin.
>- Tani waxa ay ahayd guuldarradii 10-aad ee horyaalka garoonkeeda ku soo gaarta Cardiff City xilli ciyaareedkan, waana tiradii ugu badnayd hal xilli ciyaareed ee ay guuldarradaasi soo gaarto tan iyo xilli ciyaareedkii 1994-95 markaasoo ay guuldarro 12 ah ay gurigooda ku soo gaartay ayna u laabteen heerka labaad ee Ingiriiska.
>- Liverpool ayaa haatan guul gaartay kulankeedii sagaalaad oo xiriir ah tartammada oo dhan waana guushoodii xiriirka ahayd oo ugu dheereyd tan iyo bishii April sanadkii 2014-kii, markaasoo uu kooxda watay Tababare Brendan Rodgers sidoo kalena ay guul gaareen sagaal kulan oo xiriir ah.
>- Cardiff ayaa guuldarro la kulantay afartii kulan ee ay horyaalka Premier League ku wajahday naadiga Liverpool, waxaana dhammaan laga dhaliyey kulamadaas 15 gool, waana in ka badan koox kasta oo kale tartankan.
>- Goolkii Georginio Wijnaldum ee kooxda Liverpool, waxa uu ahaa goolkiisii labaad ee uu ku dhaliyo meel ka baxsan garoonka kooxdiisa kulamada horyaalka Premier League, waxaana 19 gool oo kale oo uu dhaliyey ay yimaadeen isagoo ku ciyaaraya garoonka kooxdiisa.
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii kooxda Arsenal ay xalay guuldarrada kala kulantay Crystal Palace
RASMI: Kooxda PSG oo markeedii siddeed ku guuleystay horyaalka Faransiiska ee Ligue 1